Ny famaritan'i John Henry Newman ny 'famaritan'ny lehilahy iray'
Fiteny Readings & Resources
Ny sombiny dia ohatra tsara indrindra amin'ny fanoratana tarehimarika
Mpitarika ao amin'ny Hetsika Oxford sy kardinaly iray ao amin'ny Eglizy Katolika Romana, John Henry Newman (1801-1890) dia mpanoratra mpanoratra iray ary iray amin'ireo mpanao asa tanana manan-talenta indrindra tamin'ny Grande-Bretagne tamin'ny taonjato faha-19. Izy no mpitarika voalohany tao amin'ny Oniversiten'i Katolika any Irlandy (University College Dublin ankehitriny) ary nohamafisin'ny Fiangonana Katolika tamin'ny septambra 2010.
Ao amin'ny "The Idea of ​​a University", natolony ho andian-dahatsary tamin'ny 1852, dia namaritra famaritana mandaitra sy fiarovana ny fanabeazana momba ny haitao liberaly i Newman, ary milaza fa ny tanjona voalohany amin'ny oniversite dia ny hampivelatra ny saina, fa tsy tokony hampita vaovao.
Avy amin'ny lahateny faha-VIII amin'ity asa ity no tonga "Famaritana lehilahy iray," ohatra tena tsara amin'ny soratra manoratra . Fanamarihana ny fianteheran'i Cardinal Newman amin'ny rafitra mifandraika amin'ny famaritana lava - indrindra fa ny fampiasana azy amin'ny tranokala sy ny tricolons .
'Famaritana ataon'ny lehilahy iray'
[I] t is almost definition of a gentleman to say that he is the one who never causes pain. Ity famaritana ity dia samy rafitra ary, raha ny tena izy, marina. Izy no mipetraka amin'ny ankapobeny fotsiny amin'ny fanesorana ireo sakana izay manakana ny hetsika malalaka sy tsy misy fihetseham-po amin'ireo izay mikasika azy, ary mifanaraka amin'ny fihetsik'izy ireo fa tsy mandray andraikitra amin'ny tenany. Ny tombontsoa azo raisina dia azo raisina ho mifanaraka amin'ny antsoina hoe fampiononana na fiononana amin'ny fandaharam-potoana manokana: toy ny seza mora na afo tsara, izay manao ny anjarany amin'ny familiana ny hatsiaka sy ny reraka, na dia manome ny fitaovan'ny fitsaharana sy ny hafanana biby aza ny natiora tsy misy azy ireo.
Ny tena marina amin'ny fomba toy izany dia misoroka tsara izay mety hampisy siny na tsikera ao an-tsain'ireo izay nametrahany azy; - ny fifandonana rehetra, na ny fifandonan'ny fihetseham-po, ny fifehezana, na ny ahiahy, na ny alahelo, na ny alahelony ; Ny ahiahiny dia ny hahatonga ny olona tsirairay ho mora vidy sy ao an-trano.
Ny masony mandinika ny rahona rehetra; Izy dia manolo-tena manoloana ny fieboeboana, malefaka manoloana ny lavitra, ary mamindra fo amin'ny absurd; Izy dia afaka mahatsiaro izay lazainy; Miaro amin'ny fiampangàna tsy voafehy, na lohahevitra mety hanorisory azy; Tsy dia be resaka loatra izy ao anatin'ny resadresaka, ary tsy mahasosotra velively. Manazava ny tombontsoa izy rehefa manao azy ireo, ary toa mahazo mandray azy rehefa manome. Tsy miresaka momba azy mihitsy izy, afa-tsy rehefa voatery, tsy miaro ny tenany amin'ny tsiambaratelo fotsiny, tsy manan-tsofina amin'ny fanendrikendrehana na fifosana, dia mandresy lahatra amin'ny fanentanana ny antony manosika azy, ary mandika ny zava-drehetra ho an'ny tsara indrindra. Tsy midika na kely velively izy ao anatin'ny disadisa misy azy, tsy mandray tombony tsy ara-drariny, tsy misy hadisoana mihitsy na fanambarana maranitra ho an'ny fanoherana, na manaloka ny ratsy izay tsy sahy milaza azy. Avy amin'ny fahatsapana mibaribary, dia manamarika ny haben'ny mazika fahiny izy, ka tokony hitarika antsika amin'ny fahavalontsika ho toy ny andro iray ho namantsika. Manana fahamatorana be loatra izy ka tezitra amin'ny ompa, malahelo loatra izy, ary mahatsiaro ho ratra, ary malahelo be loatra. Manam-paharetana izy, mandefitra ary mametra-pialana, amin'ny foto-pisainana filôzôfika; manafoana ny fanaintainana, satria tsy azo ihodivirana izany, ho fahafaham-po, satria tsy azo havaozina sy ho faty izany, satria anjaran'izy io.
Raha mifanohitra amin'ny karazany rehetra izy dia miaro azy amin'ny fahaiza-mandanjalanja ny fahaiza-mandanjalanja izay mety ho tsara kokoa, saingy, saingy tsy dia nahita fianarana loatra; izay, tahaka ny fitaovam-piadiana mahery vaika, mandoaka sy mipetaka fa tsy manadio madio, izay manadino ny hevi-dehibeny, mandany ny heriny amin'ny tsy fahampian-tsakafo, diso hevitra ny fahavalony, ary mamela ny fanontaniana hiankin-doha bebe kokoa noho izay hitany. Mety ho marina na diso izy raha ny heviny, saingy tsy dia ara-drariny loatra izy; Izy dia tsotra toy ny hamoahana azy, ary fohy toy ny fanapahan-keviny. Tsy misy na aiza na aiza hitantsika fandeferana, fiheverana, fahasiahana: manipy ny tenany ao an-tsain'ny mpanohitra azy izy, manao ny fahadisoany izy. Fantany ny fahalemen'ny antony maha-olombelona sy ny heriny, ny faritaniny ary ny fetrany. Raha tsy mpino izy dia ho lasa lalina sy be saina loatra izy mba haneso ny fivavahana na hanohitra azy; Hendry loatra izy raha te ho mpahay matematika na fanatanjahan-tena.
Hajainy ny fivavaham-po sy ny fanoloran-tena; Manohana ny orinasa ho toy ny mendri-piderana, tsara tarehy, na ilaina izy, izay tsy anekeny; Manome voninahitra ireo minisitry ny fivavahana izy, ary midika izany fa mandà ny mistery izy, tsy manendrikendrika na manely azy ireo. Izy dia naman'ny fandeferana ara-pivavahana, ary tsy noho ny filôzôfia nampianarany azy hijery ireo karazam-pinoana rehetra amin'ny maso tsy manavakavaka, fa koa amin'ny hatsaram-panahy sy ny fahatsapana ny fahatsapana, izay manompo sivilizasiona.
Tsy hoe tsy mitazam-pinoana koa izy, amin'ny fombany manokana, na dia tsy Kristianina aza izy. Amin'izany, ny fivavahany dia iray amin'ny saina sy ny fihetseham-po; Izany no endrik'ireo hevitra ireo amin'ny ambony sy ambony ary mahafinaritra, izay tsy misy ny filozofia lehibe. Indraindray izy dia manaiky ny maha-andriamanitra azy, indraindray izy dia manasa fitsipika na toetra tsy fantatra amin'ny toetran'ny fahalavorariana. Ary io famoahana ny anton'ny fisainany, na ny famoronana ny mozikany, no mahatonga ny foto-kevitra tsara toy izany, sy ny fanombohana ny fampianarana isan-karazany sy mandaitra, ka toa toa mpianatry ny kristianisma mihitsy aza izy. Noho ny fahamarinan'ny fahamendrehana sy ny fahamendrehan'ny fahefana ara-pitenenany dia afaka mahita ny fihetseham-po mifanaraka amin'ireo izay mihazona foto-pampianarana ara-pivavahana izy, ary miseho amin'ny hafa izy mba hahatsapa sy hitazona ny faribolana manontolo momba ny teolojiana, izay misy ao Ny sainy dia tsy misy afa-tsy ny isan'ny deductions.
Ny lahateny fanokanana an'i John F. Kennedy
Ilay biby ambany indrindra, nataon'i Mark Twain
Ny fitsidihan'i Francis Bacon
Grammar Crackers: Anjatony, Riddles, ary Word Play
Ny famonoana ho faty, avy amin'i HL Mencken
Revenge, nataon'i Francis Bacon
Tranon'ny Mpanjaka "Manana Dream" aho
Fanamarihana, teny filamatra, ary mpanampin-tsofina avy amin'ny fiteny manaitra kokoa
Momba ny fitsarana an-tendrony nasionaly, nataon'i Oliver Goldsmith
Miara-misakafo: Fampidiran-dresaka momba ny resadresaka
Ny hevitr'i Henry David Thoreau momba ny fitiavana
Francis Bacon amin'ny Tanora sy ny Zavakanto
Ahoana no hanoratanao ireo fahotana mahafaty fito ao amin'ny Kanji Japoney
Inona avy ny Architecten Byzance? Jereo ireo fiangonana kristianina tany am-piandohana
Tari-dàlana ho an'ny mpianatra amin'ny fialantsasatry ny fianarana ambony
Fantaro ireo singa manokana amin'ny fiafaran'ny Ady Lehibe II
Fahatakarana ny fotoam-pialan-tsasatra Zulu sy Time Coordinated
Fifandanjana eo amin'ny "Quote" sy "Teny nindramina": Inona no atao hoe tsara?
Ny Csárdásfürstin Synopsis
Ahoana ny fomba fanaovana asa vita amin'ny vato sy vato
Genealogy Correspondence 101
Inona avy ireo fitsipika ara-panahy?
Ahoana ny fomba ahafahana manamboatra avana amin'ny hetsika fitaratra mamirapiratra
Inona no atao hoe Baron?
Emperora Hirohito avy any Japana
11 Ireo manam-pahaizana mainty hoditra sy manam-pahaizana momba ny sosialy
Inona no lanjan'ny loka Nobel ho an'ny medaly?
Ny Krizin'ny Krizin'ny Kiobana tamin'ny taona 1962
The Penguin Stolen
Biôlôjian'ny prefixes sy suffixes: dactyl-, -dactyl
Foto-tsarintany: Zheng He sy ny Harena Sarobidy
Honda CB125 Famerenana amin'ny laoniny
Fort Necessity sy ny ady amin'ny ala goavambe
Trano fonenana, lava lava, ary avaratra
Inona no dikan'ny "Dissoi Logoi"?
Fividianana fiara ampiasain'ny mpivarotra iray
US Foreign Policy 101
Famaritana sy ohatra amin'ny Apophasy ao Rhetoric
10 TV Shows Izay Tsy Tokony Hanafaingana An'Andriamanitra